Akeekkachiisa dubbii dogongorsiifamee wabeeffame! – ኢትዮጵያ ቼክ
Akeekkachiisa dubbii dogongorsiifamee wabeeffame!
Fuulawwan Feesbuukii The Arada fi Ethio Press jedhaman “pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa barbaachisaa ta’ee yoo argame naannoo Oromiyaa ji’a tokko keessatti sadarkaa guutumaan guutuutti jedhamuun gara nageenyashee duraanitti ni deebisna jechuun Caffeef haasaa taasisaniiru” jechuun odeeffannoo qoodaniiru.
Maxxansi fuula Feesbuukii The Arada fayyadamtoota Feesbuukii 200ti siiqanin yemmuu qoodamu namootni kuma lamaa ol immoo yaada /comment/ isaanii jalatti barreessaniiru.
Maxxansi fuula Feesbuukii Ethio Press immoo namoota 130 olin qoodameera.
Haa ta’u malee pirezidaantichi gabaasa ji’oota torbaa bara 2014 kan qaama raawwachiiftuu naannichaa yeroo dhiyeessanittis ta’e gaafiiwwan miseensoota Caffeerraa dhiyaataniif deebii yemmuu laatan haasaa kana hin dubbanne.
Haa ta’u malee “ummatnifii caasaan keenya tokko ta’ee ejjennoo qabate taanaan Shaneen ji’a tokko turuu hin dandeessu” jechuun dubbataniiru.
Kun immoo “barbaachisaa ta’ee yoo argame naannoo Oromiyaa ji’a tokko keessatti sadarkaa guutumaan guutuutti jedhamuun gara nageenyashee duraanitti ni deebisna” kan jedhuun hiikaa adda ta’e kan qabudha.
Dabalataan “kaayyoo siyaasaa ittin qabsooftu hin qabdu, ajandaa siyaasaa ittin nama hiriirsistu hin qabdu, ummata sukkanneessiteeti kan ishiin hiriirsuudhaaf yaalaa jirtu” jedhan.
Rakkoolee nageenyaa naannicha keessaa ilaalchisee miseensoota Caffeerraa gaafiiwwan baay’inaan kan dhiyaataniif pirezidaantichi, bulchiinsi isaanii ummatafii mootummaa federaalaa waliin ta’uun Waraana Bilisummaa Oromoo kan mootummaan ‘Shanee’ jechuun waamu dhabamsiisuuf akka hojjetu himaniiru.